V4.4 အတွက်အလုပ်မ installers
V4.4 အတွက်အလုပ်မ installers 1 months ago4တစ်နှစ် #1364
ငါကမှားဘယ်သို့ပြုသလော ငါအဘို့အလေယာဉ်ပျံများနှင့်ရှုခင်းနှစ်ခုလုံးကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီးပြီ P3D V4 နှင့် V4.4 သို့သူတို့ကိုငါကိုတပ်ဆင်ရန်ထည့်သွင်းတပ်ဆင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အားလုံးကိစ္စများတွင်ငါက installed ခံရဲ့ check လုပ်ထားပြီးပြီ P3D v4 ။ installers များကိုအလိုအလျောက်လည်ပတ်ခွင့်ပြုရန်နှင့်ကျွန်ုပ်အား installer ကိုညွှန်ပြရန်ကြိုးစားခဲ့သည် P3D လမ်းညွှန်။ တပ်ဆင်ပြီးနောက်, ထုတ်ကုန်ထဲမှာမရှိကြပေ P3D, သူတို့က Addit အတွက်ပေါ်လာပါဘူး။ Pro အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်အချိန်နှင့်အခက်အခဲများကိုကိုယ်တိုင်ထည့်သွင်းရန်လိုပါက P3D ဖိုလ်ဒါအားလုံးအိုကေပါတယ် ငါ့ P3D ပရိုဂရမ်ဖိုင်တွဲထဲမှာဖြစ်ပါသည်:
"က F: \_ Program Files \_ Lockheed Martin ကုမ္ပဏီမှ \_Prepar3D v4 "
အဆိုပါ၏ကျန် P3D ဖိုလ်ဒါက C အပေါ်နေသောခေါင်းစဉ်:
"ကို C: \_ ProgramData \_ Lockheed Martin ကုမ္ပဏီမှ \_Prepar3D v4 "
ဤတွင်နှင့်အတူစမ်းသပ်ဖို့2ဖိုင်တွေရဲ့:
sikorsky_s76a_spirit.exe - installer ကို 9.85
ယခုတွင်ငါသည်အပိုဆောင်းရှိသည်! Pro ကို v8.6.1 နှင့်ပြသနာကိုကျော်လွှားနိုင်စေရန်အဖြစ်သုံးပြီးကြိုးစားနိုင်ပေမယ့် installation ကို .exe ဖိုင်တွေအလုပ်လုပ်ခဲ့လျှင်အကြီးအပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်မှု - ဖြင့် rgp1942။ အကြောင်းပြချက်: မှန်ကန်သော typo
V4.4 အတွက်အလုပ်မ installers 1 months ago4တစ်နှစ် #1370
\_ Program Files \_ Lockheed Martin ကုမ္ပဏီမှ \_: သင် installer ကို "က F သို့ဖိုင်များကူးယူကြောင်းငါ့ထံသို့အတည်ပြုနိုင်သလားPrepar3D v4 "နှင့်မရ" ကို C: \_ Program Files \_ Lockheed Martin ကုမ္ပဏီမှ \_Prepar3D v4 "
V4.4 အတွက်အလုပ်မ installers 1 months ago3တစ်နှစ် #1381
သင်သည်သင်၏ထုတ်ကုန်မှတ်ပုံတင်ရန်ခဲ့သလား မရလျှင်, သင်တို့ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်အရာကိုန့်အသတ်ရှိပါတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ငါနဲ့အတူတူပါပဲနှင့်အတူတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြရတယ်။ သငျသညျအခမဲ့အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ရှိပါကသင်နှင့်အတူကစားရန်အပေါငျးတို့သ tools တွေမရှိကြပါဘူး။ Paid အဖွဲ့ဝင်များအပေါငျးတို့သခေါင်းလောင်းထိုးနှင့်စီများမှုတ်ရ။
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်မှု - ဖြင့် jumpseat လေယာဉ်မှူး.
V4.4 အတွက်အလုပ်မ installers 1 months ago2တစ်နှစ် #1391
ငါတူပြဿနာရှိသည်။ အဘယ်အရာကိုမျှအစဉ်အမြဲအလုပ်ဖြစ်တယ် P3D v4 ။
ငါ Rikooo အတူတက်ပေးခြင်းဖြစ်၏။
V4.4 အတွက်အလုပ်မ installers 1 months ago2တစ်နှစ် #1392
ကျေးဇူးပြုပြီးပိုတိတိကျကျပြောနိုင်မလား။ Install လုပ်ခြင်းသည် rgp1942 ကဲ့သို့အလုပ်မလုပ်ပါသို့မဟုတ်သင်အချို့ download လုပ်ပြီးပါပြီ add-onသဟဇာတမဟုတ်သော့ Prepar3D v4? ဒါဟာနှစ်ခုကိုမတူညီတဲ့ပြဿနာတွေပါပဲ။
သတင်းအချက်အလက်များအတွက် Prepa3D v4 စာရင်း add-onဒီမှာလိုက်ဖက်တဲ့အရာ www.rikoooo.com/prepar3d-v4
V4.4 အတွက်အလုပ်မ installers 1 months ago2တစ်နှစ် #1393
သင့်ရဲ့ပါလျှင် Prepar3D v4 က F ၌တည်ရှိ၏: \_ Program Files \_ Lockheed Martin ကုမ္ပဏီမှ \_Prepar3D v4 ထို့နောက်လမ်းကြောင်းက F ကိုရွေးပါပြီးရင်ထုံးစံ installation ကိုရွေးချယ်နိုင်အောင် browse button ကို click နှိပ်: \_ Program Files \_ Lockheed Martin ကုမ္ပဏီမှ \_Prepar3D တစ်ဦးဦးတည်ရာဖိုင်တွဲအဖြစ် v4 ။ ဒါဟာပြဿနာတစ်ခုမပါဘဲအလုပ်လုပ်သင့်ပါတယ်။
"Program Files" ဟုကို C များအတွက် reserved ဖြစ်ပါတယ်မူအရ: အက်ဖ်အပေါ် \_ Program Files \_: သို့သော်သင်က folder ကို F ကိုရှိမနေသင့် / drive ကိုငါ Installer ၏ရှုပ်ထွေးမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဘာထင်ငါလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါမြင်ရပါလိမ့်မည် မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်အတွက် fix ။
V4.4 အတွက်အလုပ်မ installers 1 months ago2တစ်နှစ် #1394
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုသဟဇာတ -ATR 72 ဖြစ်လို့ယူဆတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ငါအလိုအလျှောက်ဖို့ကစွန့်ခွာလျှင်၎င်းသည်ကို C ထဲမှာတပ်ဆင်ပြီး: drive တခုဖြစ်တယ်။
ငါ့အဖို့လမ်းကြောင်း P3D is F:Prepar3D v4 ။
ထုံးစံ install နှင့်ဤဦးတည်ရာကိုညွှန်ပြတောင်မှအတူကအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။
V4.4 အတွက်အလုပ်မ installers 1 months ago2တစ်နှစ် #1395
ယနေ့ငါအခုအလုပ်လုပ်သင့်တယ်, နောက်တဖန်ဒေါင်းလုတ်လုပ်ကျေးဇူးပြုပြီး ATR 72 နှင့် ATR42 များအတွက် installer ကို updated ပါပြီ။
အားလုံးအခြားသူများ add-onအဘို့အ s ကို Prepar3D v4 လာမည့်3ရက်အတွင်း updated လိမ့်မည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
V4.4 အတွက်အလုပ်မ installers 1 months ago2တစ်နှစ် #1397
ဒါဟာယခု installed နှင့်ယခုအထိဿုံအလုပ်လုပ်ပုံရသည်ဖြစ်ပါတယ်။
V4.4 အတွက်အလုပ်မ installers 1 months ago2တစ်နှစ် #1404
အားလုံး add-onဒီမှာစာရင်းပါ www.rikoooo.com/prepar3d-v4 တပ်ဆင်နှင့်အတူပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ updated ပါပြီ။
0.274 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်